Budata Free Gif Effect maka Windows
Budata Free Gif Effect
Free Budata maka Windows (7.60 MB)
Budata Free Gif Effect,
Mmetụta Gif efu bụ sọftụwia dị mfe ma dị mfe iji mepụta faịlụ gif nke gị site na ịgbakwunye animation na mmetụta dị iche iche na foto na onyonyo nkeonwe gị na kọmputa gị.
Ihe omume a, nke ị nwere ike iji ngwa ngwa ekele maka interface enyi na enyi ya, na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta faịlụ GIF nke gị.
Nihi mmetụta dị iche iche ị nwere ike itinye na foto gị, ị nwere ike ime ka foto gị dịkwuo ụtọ ma na-ekekọrịta ha na ndị ị hụrụ nanya ngwa ngwa.
Iji nwee ike iji mmemme ahụ, nke na-enye gị ohere ịhazigharị ọnụego etiti na mkpebi animation, naanị ihe ị ga - eme bụ họrọ foto ịchọrọ ịgbakwunye mmetụta na mmetụta ịchọrọ itinye, wee chekwaa faịlụ ahụ.
A na-echekwa onyonyo gị, nke ị na-atụgharị na faịlụ gif site na ịgbakwunye animation dị iche iche, na kọmputa gị ma echekwara ya na sava ndị nrụpụta. Nụzọ dị otú a, mgbe ịchọrọ ịkọrọ ndị enyi gị foto gị, ọ ga-ezuru iji ngwa ngwa kesaa adreesị njikọ enyere gị na ndị enyi gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme dị mfe ma bara uru iji jikwaa ole na ole iji ihe ngosi dị iche iche dozie faịlụ gif, Free Gif Effect nwere ike ịbụ mmemme ị na-achọ.
Free Gif Effect Ụdịdị
Nha faịlụ: 7.60 MB